One Sunny Day ( 2014 ) - မြန်မာစာတန်းထိုး
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ ၀ါရင့် မင်းသားကြီး တစ်ဦးဖြစ်တယ့် မင်းသား So Ji-Sub နဲ့ Descendant of The Sun ဇာတ်​ကား က second lead Kim Ji-Won တို့နှစ်​ဦး ပါဝင်​ သရုပ်​​ဆောင်​ထားတဲ့ ဇာတ်​လမ်း​လေးပါ ...
So Ji-Sub က ဖျော်​​ဖြေပွဲ တစ်​ခုဖန်​တီးဖို့ ဂျယ်​ဂျူးကျွန်းကို ကွင်းဆင်း​လေ့လာခဲ့ပါတယ်​ ... So Ji-Sub က ဂျယ်​ဂျူးကို မသွားခင်​မှာ ရည်​စားနဲ့ပျက်​ခဲ့ပါတယ်​ ... အသည်းကွဲ​နေတဲ့ ​ကောင်​​လေးတစ်​​ယောက်​ ဂျယ်​ဂျူးကို စိတ်​​ပြေလက်​​ပျောက်​အလုပ်​ကိစ္စခရီးထွက်​ရင်​ ကောင်​​ကောင်​မ​လေးတစ်​​ယောက်​နဲ့အမှတ်​မထင်​ဆုံ​တွေ့ခဲ့ရာ ...
အဲ့​ကောင်​မ​လေးက​တော့ Kim Ji-Won ပဲဖြစ်​ပါတယ်​ ... Kim Ji-Won က ဂျယ်​ဂျူး မှာ သစ်​ပင်​ဥယျာဉ်​​အ​ကြောင်း ​လေ့လာဖို့​ရောက်​လာရင်း ဂျယ်​ဂျူးမှာ ဘယ်​လို​တွေဖြစ်​ပျက်​ကြမလဲဆိုတာ စိတ်​ဝင်​စားဖွယ်​ ​ကောင်း​စေပါတယ်​ ...
ကဲ ဇာတ်​လမ်း​ပေါ်က ကြည်​နှုးခန်း​လေး​တွေကို​တော့ ကိုယ်​တိုင်​ Down ပြီးကြည့်​လိုက်​ကြပါစို့ လို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် ...
Rating အရကြည့်မယ်ဆိုရင် Viki မှာ 8.7/10 နဲ့ MyDramaList မှာ 7.6/10 အသီးသီး ရရှိထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းကောင်းလေး တစ်ခုပါ ...
Translator - MTK
Quality - 560p
Episode9( Vidoza Link )
Episode 10 ( Vidoza Link )
Labels: Drama Korea Romance
SiNistra April 16, 2017 at 11:25 AM
Still no new episodes?
SiNistra April 18, 2017 at 4:31 AM
Thanks much for uploading new episodes.
thae zarzaw August 30, 2017 at 8:23 PM
10 က အပြီးလားရှင့်...
mie mie September 23, 2017 at 9:29 PM
Epi3ကစပြီး Openload ကမရတော့ဘူး